Andininy Rick Chavie momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Rick Chavie
Rick Chavie dia notendrena ho CEO an'ny EnterWorks tamin'ny Mey 2015. Tonga tany EnterWorks izy taorian'ny nanompoany ho SVP, Global Solution Management miaraka amin'ny hybris sy ny vondrona Customer Engagement and Commerce an'ny SAP, izay nampiarahany amin'ny varotra nomerika sy ara-batana ary fananana CRM ho an'ny traikefa mpanjifa tsy misy tomika.
Manamboara Fifandraisan'ny mpanjifa maharitra miaraka amin'ny atiny kalitao
Alatsinainy, May 16, 2016 Rick Chavie
Ny fanadihadiana vao haingana dia nahitana fa ny 66 isan-jaton'ny fihetsika miantsena an-tserasera dia misy singa mampihetsi-po. Ireo mpanjifa dia mitady fifandraisana maharitra sy mampihetsi-po izay mihoatra ny fividianana bokotra sy doka kendrena. Tian'izy ireo ny hahatsapa ho faly, milamina na faly rehefa miantsena amin'ny mpivarotra an-tserasera. Ny orinasa dia tsy maintsy mivoatra mba hanao ireo fifandraisana ara-pientanam-po amin'ireo mpanjifa ary hametraka tsy fivadihana maharitra izay misy fiantraikany mihoatra ny fividianana tokana. Mividiana bokotra sy dokam-barotra atolotra amin'ny media sosialy